जाडोमा कोठा न्यानो बनाउँदा हुनसक्ने यी गल्ती, जसले ज्यान समेत जान सक्छ - लोकप्रिय समाचार
४ मंसिर २०७८, शनिबार by लोकप्रिय समाचार
अघिल्लो वर्ष नै जाडो मौसममा उपत्यका बाहिर पनि आगलागी र निसासिएर मृत्यु भएका धेरै घटना सार्वजनिक भएका छन् । कैलालीको धनगढीस्थित भन्सार रोडकी एक महिलाको घरभित्रै आगो ताप्ने क्रममा कपडामा आगो सल्किएर ज्यान गयो । गत वैशाखमा भक्तपुरमा झ्याल–ढोका थुनेर कोइला बाल्दा निसासिएर एक सुत्केरीको ज्यान गयो । यी त सार्वजनिक भएका घटना हुन् । दूरदराजमा यसरी निसासिएर ज्यान गएका कैयौं घटना समाचार बन्दैनन् ।
यो हानिकारक ग्यासले मान्छेमा वान्ता हुने, मुटुको धड्कन असामान्य हुने एवं मस्तिष्कमा असर गर्नेजस्ता लक्षण देखिन्छ । तर सुतेको बेलामा मान्छेले यस्तो लक्षण महसुस गर्न नसक्ने भएकोले मुटुको धड्कन रोकिएर मान्छेको ज्यान जाने गर्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष अहिलेसम्म निसासिएर मृत्यु भएको कुनै घटना सरकारी निकायमा दर्ता भएको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. दिजन भट्टराईले अहिलेसम्म विद्युतीय उपकरण एवं आगो बाल्दा निसासिएर वा आगलागी भएर ज्यान गुमाएको भन्ने सूचना प्राधिकरणलाई नआएको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सार्वजनिक भएका ६ घटनामा ७ जनाको निसासिएर मृत्यु भयो भने ६ जना घाइते भए । त्यस्तै, २०७५÷७६ मा रेकर्ड भएका ६ घटनामा १० जनाले निसासिएर ज्यान गुमाए भने ६ जना घाइते भए । २०७६÷७७ मा भएका कुल ८ घटनामा १४ जनाको ज्यान गयो भने ५ जना घाइते भएका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. भट्टराई विशेषगरी तराई भेगमा निसासिएर मृत्यु हुने र आगलागीबाट ज्यान जानेको संख्या बढी हुने गरेको बताउँनुहुन्छ । ‘विशेषगरी तराईतिर जाडोबाट बच्न झ्याल÷ढोका थुनेर आगो बाल्ने चलन देखिन्छ । जसले एकातिर निसासिने सम्भावना बढी देखाउँछ भने आगो ननिभाई निदाउने हुँदा आगलागीको जोखिम पनि उस्तै बढ्ने गरेको पाइन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
लापरबाही गर्दा झुप्रा र साना घरमा मात्रै होइन, राम्रा होटलमा पनि हरेक वर्ष निसासिएर ज्यान जाने गरेको भट्टराई बताउँनुहुन्छ ।
चिसोमा निसासिएर मृत्यु हुने अधिकांशमा कार्बनमोनोअक्साइडको असर पर्ने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका सहप्राध्यापक एवं वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बम जाडो मौसममा चिसोबाट बच्नका लागि भेन्टिलेसन नखोली आगो, गिजर, हिटरजस्ता मेसिनहरु चलाउँदा यसले अक्सिजन सोस्ने र कार्बन मोनोअक्साइड जस्ता हानिकारक ग्यास प्रवाह गर्ने बताउनुहुन्छ । कोइला, मकलजस्ता प्रत्यक्ष धुवाँ आउने प्रविधि एवं हिटर, गिजरजस्ता विद्युतीय प्रविधिले पनि शरीरमा रहेको अक्सिजन सोस्ने गर्छ । यसले शरीरको कोषमा हुने अक्सिजनलाई सोसेर कार्बन मोनोअक्साइड प्रतिस्थापन गराइदिन्छ ।
यस्तो जोखिमबाट बच्नको लागि एउटै उपाय हो, सुत्नेबेलामा सावधानी अपनाउनु । धेरैजसो व्यक्तिलाई सुत्ने वा नुहाउने बेलामा यस्तो समस्या हुने गरेको डा. बम बताउँनुहुन्छ । यसको लागि सावधानी अपनाउनु नै एक मात्र बच्ने उपाय हो । यसको लागि भेन्टिलेसन खुला राख्ने, आगो ताप्दा नजिकै बसेर नताप्ने जस्ता सावधानी अपनाउनुपर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
Prevनेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बलेफी– ६ को अध्यक्षमा घिमिरे
Nextआईचर र मोटरसाईकल ठोक्कीदा दिँदा एकको मृत्यु, एक घाईते